WASIIR IMAARAATIGII HADLAY MA WAX CUSUB BUU SHEEGAY? (W/Q: C/Raxmaan Caydiid) • Oodweynenews.com Oodweyne News
Dhowr qodob ayaynu xusi karna: Waa midda koowaade-e, Emirites-ku gobolka oo dhan oo Somaliyana ka mid tahay mashaariic la xidhiidha ganacsi, dekado dhisid iyo saldhigyo milateri ayay ka wadaan, bal qabsoo ciddina kama hadasho, xataa kuwa Somalia ee Puntlandba ka midtahay. Waa midda labaad-eUAE (Emirates) Somaliland ma aqoonsana siyaasiyan, hase yeeshee way la macaamishaa, iyadoo ogsoon in aanay Xamar xukumin Somaliland wax saamayn ahna aanay ku yeelan Karin wixii gudaha Somaliland laga fulinayo. Waa Midda saddexaad-e, waxaa dadka Siyaasadda hogaamiya iyo kuwa kale ee calal aqal wax uga baxsanyihiin iska ogyihiin in Somaliland dhulkeeda xukunto, sidoo kalena Somalia kursigii aqoonsiga dawladnimada Somalia (waa tii Siyaad Barre markii u dambaysay xuumi jiraye, ee maantana Muqdisho fadhida) ay iyadu ku fadhido. Dabcan cid kasta oo Somaliland heshiis caalami ah oo maalgashi la gelaysaaba labadaa awoodood midba gaarkeeda ayay ula macaamilaysaa. Mid walbana wejiga raaligelinaya ee jiritaankeeda waafaqsan ayaa lagula macaamilayaa. Midda afraad waxa weeye, in sababta dawladda Somaliya caalamku u aqoonsaday iyadoo aan buuxin shuruudihii dawladnimo ay ahayd in la helo dawlad lala geli karo oo saxeexi karta wixii heshiisyo caalamami ah. Dawladdii xasan Sheekh ayaa dawlad la aqoonsanyahay ugu horaysay, Siyaad dabadii. M/weyne Obama ayaa go’aanka aqoonsiga gaadhay dunida intii kalena way iska daba gashay. Midda kale Maalgashi caalamiya marka la leeyahay heshiisyo caalamiya ayaa hoggaamiya. Kuwaana ama fad ama ha fadin, waa lagu fadsiin uun, marka maxkamadaha caalamagiga ah lagu wada hadlayo.
Ninkaa odayga ahi waxa keliya oo uu sheegay in ay dawlad Somaliya la yidhaa aqoonsanyihiin, laakiin aanay Somaliland aqoonsanayn. Waxaa kale oo uu sheegay in ay Somalilandna la macaamilaan. Waxaa kale oo uu intaa ku daray inay arimaha heshiisyada iyo hawlaha ay Somaliland ka wadaan ay dawladihii hore e Somaliya kala hadleen, oo macnaheedu yahay in la wargeliyay, maadaama dee ay kursigii Somliyadii la wada lahaa ku fadhiyaan. Intaasuba waa wada run.!!! Yaah… oo hadda maxaa lagu haystaa oo Somaliland ka wada qaylisiiyay? Ama lagu taageeri ee loogu farxayaa hdalkiisa oo ciddii aan Somaliland ahayni u sacaba tumi. Xaqiiqadu waxa weeye ninkaasi wax cusub inoomuu sheegin, ee dhibtu waxay tahay Somali meel ay joogtaba caadifad ayay lawada miyir la’yihiin, qabyaaladina laba indhoodh ayay ka tuurtay.
Ugu dambayn, Madaweynaha MBC waa isna la gudboon in wixii khaldan uu saxo, dadkana shakiga laga saaro, isla markaana uu Siyaasad cad oo lagu hagayo sida saaxiibo Somaliland u kasbanayso, isla markaana isbedelada mandaqadda ka dhacaya loola jaan qaadayo uu la yimaado. Waxaa kale oo la gudboon xukuumdda in ay la timaado Siyaasad iyo istratijiyad ay kula dhaqmayso dawladda federaalka Somaliya oo u muuqata in markii ay woxoogay yara dhiigaysatay ee indhuhu u yara biniixeen, Somaliland mooyee aan wax kale arkayn. Iyagana waxaynu xasuusinaynaa in ay ciyaarta suunka hoostiisa iska dhaafaan oo fahmaan in Somaliland wax badan tirsanayso, isla markaana inta la wadaago ay ka badantahay inta lagu kala duwanyahay.